ကဗျာများ | တောရက်စ် (mc)
တစ်ချိန်မှာ ဝေးရမယ်ဆိုတာလည်း သိတယ်
ဒါပေမယ့် နင်က –
ဘာကြောင့် ချစ်တာလဲလို့ မေးတိုင်း
ဒီရင်ဘတ်ကြီးကိုပဲ ပုတ်ပြီး မေးစေချင်တယ်
(ငါ ကိုယ်တိုင်လည်း မသိလိုက်ဘူးလေ)
မချစ်နဲ့လို့ တားနိုင်ရင်လည်း အကောင်းသား
ငါ့ နှလုံးသားလည်း လုံးပါးပါးနေပြီ
အိပ်မက်တွေပေးလိုက်တာ မဟုတ်ရပါဘူး …
မာနရှိပါဦးမလား … ငါ့သခင်၊)
နင် တစ်ခေါက်လောက်ကျောခင်းရင်ပဲ ကျေနပ်ရမယ့်သူပါ။
အတိတ်မေ့နေတဲ့ မနက်ခင်းတွေကိုပဲ စားသုံးပါ
ပြီးမှ နင်မလိုချင်တော့တဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေကို
ဒုတိယနဲ့ တတိယဟာလည်း အတူတူပဲ …
ဒီပွဲကို မပြိုင်ခင်က ရှုံးခဲ့တယ် …
ခပ်ဝါးဝါး လေးပါပဲ ။
အခုတော့ ချစ်သူဘဝလည်းဆုံးရှုံး သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်လည်းမကျန်တော့ပါလား……..:'(
ဒါပေမဲ့ ပိုချစ်မိတဲ့ငါ ပိုလွမ်းမိတဲ့ငါ
ပို တန်ဖိုးထားခဲ့မိတဲ့ငါ ပိုပြီးတော့
ရေတစက် ရဲ့ တန်ဖိုး
တစ်ခါမှ မသင်ယူ မလေ့လာဖူးတဲ့
ထို့ကြောင့်သူ့ကို ခဏမေ့ထားလိုက်ပါမည်………။ (လွန်းထားထား)
နင်ပြန်လာရင် .. ကြိုဆိုနိုင်ဖို့…
နင်ပြန်လာရင် .. မြင်ခွင့်ရဖို့…
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မာနနဲ့ သိက္ခာအတွက်
တချို့အချိန်အခါမှာ အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ မကောင်းတာမဟုတ်ဘူး
အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ နောက်ထပ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်ခုရဲ့ အစပဲဖြစ်တယ်။
နင်က ကမ္ဘာကြီးအတွက်တော့ လူတစ်ယောက်ရယ်
ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ နင်က ကမ္ဘာကြီးပေါ့
အချစ်ဆိုတာ လူနှစ်ဦး ဆွဲထားတဲ့ သားရေပင်တစ်ကွင်းလိုပါပဲ ။ တစ်ယောက်ယောက်က လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်မှာ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရတတ်တယ် ။
“ ကျုပ် ပျော်ရွှင်မှုကို လိုချင်တယ် ”
“ ပထမဆုံး (ကျုပ် ) ဆိုတဲ့အရာကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ အဲဒါဟာ အတ္တတစ်ခုပဲ ။ ပြီးတော့ ( လိုချင်တယ် ) ဆိုတဲ့အရာကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ အဲဒါဟာ တပ်မက်မှုတစ်ခုပဲ ။ အခုကြည့် သင့်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပဲ ကျန်တော့တယ်မဟုတ်လား ”
့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ နင့်ကိုတောင်းဆုပေးရတဲ့
တုံးတုံးအအနဲ့ နင့်ကိုနောက်တစ်ခေါက် ချစ်မိတာမျိုး
ငါလုပ်မိမှာစိုးလို့ပါ …… တောရက်စ် (mc)
ကြက်သွန်နီလို တစ်ထပ်ချင်းခွာလေ မျက်ရည်ကျရလေ
အလည်အူတိုင် (နှလုံးသား)ကို မတွေ့ရဘူးတဲ့……
“တကယ်တော့.. တစ်ထပ်ချင်း သင်ခွာနေတဲ့အရာက သူ့နှလုံးသားပါ။
စစကတည်းက သင့်ကို သူ့နှလုံးသား ပေးထားပြီးသား
နှလုံးသားတစ်ခု တွေ့နိုးတွေ့နိုးနဲ့ သင်တစ်ထပ်ချင်း ခွာနေခဲ့တာပါ”လို့….
ကောင်လေး ——– ကောင်မလေး
ကောင်လေး။ ။ ငါနင့်ကို လမ်းမေးလို့ရလား…
ကောင်လေး။ ။နင့်ရဲ့ နှလုံးသားကမ္ဘာထဲကိုလေ…
ကောင်လေး။ ။ နင့်ရဲ့ ခြေထောက်တွေ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီနော်….
ကောင်မလေး။ ။ ဘာလို့ ပင်ပန်းရမှာလဲ…
ကောင်လေး။ ။နင်က ငါ့ရဲ့ အတွေးထဲမှာ တချိန်လုံး ပြေးနေလို့လေ….
ကောင်လေး။ ။ဒီနေ့ မိုးအရမ်းကြီးတယ်နော်…
ကောင်လေး။ ။သိကြားမင်းက ငါတို့ နှစ်ယောက် အတူတူရှိတာကို သွားရေကျလို့ ဖြစ်မယ်….
ကောင်လေး။ ။ငါ့ကို ယုံပါ..ဒီကမ္ဘာမှာ ငါ့ကြောင့် နင်ဒုတိယကံအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်စေရမယ်….
ကောင်မလေး။ ။ဘာလို့ ပထမမဟုတ်ရတာလဲ…
ကောင်လေး ။ ။နင်ရှိနေမှတော့ ပထမ ကံအကောင်းဆုံး လူက ငါဖြစ်နေလို့လေ….
Posted by တောရက်စ် on August 29, 2011 at 10:50 AM
ငါ့ရဲ့ရင်နာစရာအဖြစ်တွေကို နင်ညှင်သာစွာ နှစ်သိမ့်ဖူးတယ်
ဘယ်ဘ၀ ရဲ့ ၀ဋ်တွေလဲ
နင်မရှိရင် မနေတက်တော့တဲ့ ငါ့အဖြစ်ကို နင်မြင်နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်
သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီးကြောင့်
ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ချစ်သူလေးရယ် ♥…
မင်းစကားဆို အမိန့်လိုလေးစား အသက်ကဲ့သို&
Posted by တောရက်စ် on August 29, 2011 at 10:45 AM
ဟိုး…………..အစွန်အဖျားတစ်နေရာကနေ တိတ်တိတ်ကလေး လွမ်းနေပါ့မယ်
ဒီလောက်လေးပါပဲ ( May Thet )
Posted by တောရက်စ် on August 29, 2011 at 10:40 AM
ငါ နင့်ကို သိပ်မချစ်ခဲ့ပါဘူး
နင့် အချစ်ကို သိပ်မမျှော်လင့်ခဲံပါဘူး
နင့် အတွက် မပေးဆပ်ခဲ့ပါဘူး
နင့်ကို ငါ သိပ်မတမ်းတခဲ့ပါဘူး
ဗန်းစကား ( ညီနေညီ)
Posted by တောရက်စ် on August 19, 2011 at 8:55 AM
အချစ် … တဲ့
တိတိကျကျလည်း ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ကြဘူးးး
(ဒါနဲ့များ ဘာလို့လဲ ရေပန်းစားနေလိုက်တာ)
ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ကြည့်တော့ အချစ်ဆူးတွေ စူးလို့
ရင်ဘတ်က မသင်ပဲတတ်တဲ့ ဗန်းစကား …
အချစ်လား .. ၀င်ခဲ့ပါ ( ညီနေညီ)
Posted by တောရက်စ် on August 19, 2011 at 8:45 AM
ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေကတော့ ရှိနေကြတာပဲ။
နင် အလိုကျ ကပြရအောင်
ငါလည်း ချိုမိုင်မိုင်ပဲ တတ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင် သိထားဖို့
အိမ်ရှင် အပြင်သွားပါတယ် …)
နင့် ရင်ခွင်ထဲကို ငါ ၀င်ကြည့်ချင်တယ်။
လက်မှက်ကို ကိုင်ပြီး ငါ ရောက်ခဲ့ပါရဲ့။
အံ့သြစရာ . . .
နင်ဟာ ရုံစောင့်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ဒါမှမဟုတ် . . .
ဒုတိယ ( ညီနေညီ)
ကံစမ်းမဲ ဗန်းပြပြီး ကြော်ငြာဖို့
ငါ့မှာ မရှိပါဘူး ။
(ရင်ဘတ်နဲ့ ဆန့်သလောက်တော့ ချစ်တတ်တယ်…)
တွေ့ရင် လက်တို့ပြီး မေးလိုက်ကြပါ
(ချစ်သေးရဲ့လား လို့ …)
ဒုတိယဆို ဘယ်နေရာမှ မကောင်းဘူး
(နင် သေပြီးမှ ငါသေမယ်။)
မှတ်ချက် ( ညီနေညီ)
Posted by တောရက်စ် on August 19, 2011 at 8:40 AM
အလွမ်းဆိုတာ အသံထွက်မရီတတ်တဲ့ နတ်ဆိုးတစ်ကောင်
အချိန်ဆိုတာ ၀င်သက်ထွက်သက်ရဲ့ ဘာသာစကား
ဆိုပါများလို့ မေ့သွားတဲ့ စာသားတစ်ပိုဒ်ထဲမှာ
ငါ့အိပ်မက်တွေ ၀ှက်ပါသွားတာ နင်မသိလိုက်
အငိုက်မိလို့ အချစ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဒီရင်ဘက်ကြီးကတော့
အမှတ်တမဲ့တွေ အကွက်လိုက် အကွင်းလိုက်
မြွေ မြွေချင်းကျတော့ ခြေမြင်သတဲ့
တီကောင်တွေလည်း အင်းးး . . .
ခြေပဲ မြင်မှာပါလေ (မြင်ပါစေ)
နင်နဲ့ငါက မြွေမကျ တီမက
ဗြူတီပါလာမှာ One Way လှလှလေး သွားညှပ်ထားတယ်
အိပ်ဆေးတစ်ခွက်နဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့ရတာလည်း ကြာပေါ့
ခါးစောင်းတင်ပြီး ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်
ဘာတဲ့ . . .
သံသရာမကြေဘူး နောင်ဘ၀ ဒီထက် ချစ်ပြမယ်တဲ့
Posted by တောရက်စ် on August 19, 2011 at 8:35 AM
်ချိုမြိန်တယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါ့ မယ်….
Posted by တောရက်စ် on August 19, 2011 at 8:25 AM
တချိန်က ကောင်မလေးအတွက် …( သူသိပါစေ)
Posted by တောရက်စ် on August 18, 2011 at 7:05 AM
မဖြစ်နိုင်တော့ ပေမယ့် 
မျှော်လင့် မိသေးတယ် ဒါငါ့ ဘက်ကအခွင့် ရေးပဲ။
အနားမှာ မရှိတော့ ပေမယ့် 
တောင့် တမိသေးတယ် ဒါပေမယ့် ငါချစ်နေရင်ပြီးတာပဲ။
မင်းဘက်က တုံ့ ပြန်မှုကိုမလိုပါဘူး
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းတွေကို ငါဂရုမစိုက်ဘူး။
အဓိက ကငါချစ်နေဖို့ ပဲ။
ဒါပေမယ့် အကြွေပန်းကိုစောင့် နေဖို့တော့ 
ငါ့ နှလုံးသားက အဲဒီလောက် မနူးညံ့ ဘူး။
Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...	57 responses	»
kokophoye says:	March 8, 2012 at 5:09 pm	……..ကောင်းတယ်ဗျာ …. ဆက် ကြိုးစားထားရဲဘော်ရေ…. ဒီလိုမျိုးဆို ပန်းတိုင်က မဝေးတော့ဘူးဗျ ……:O😛
good luck…….My brother……
moehtetshann says:	October 17, 2012 at 12:51 pm	အင်းးးးးးးးးးးမိုက်လို့နည်းနည်းယူလားတယ်နော်ပိုင်ရှင်ရေ
Nyein Chan says:	April 18, 2012 at 1:18 pm	ဆရာတောရက်(စ်) အရမ်ူကောင်းတယ် ကဗျာတွေက ကြိုးစားပါ အောင်မြင်အုံးမှာ အမြဲအားအေးနေမယ်နော်…….
moe moe says:	April 27, 2012 at 6:34 pm	ကောင်းတယ် ကဗျာတွေကတော့ အသည်းကိုဟတ်တက်ထိတာပဲ…..တောရစ်ကိုယ်တိုင်ရေးတာလာ ဟဲဟဲ….
maylay says:	June 7, 2012 at 11:46 am	ကဗျာတွေက အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ဆရာရေ…ဆက်ကြိုးစားပါနော်………………………..
MoeMoe says:	June 15, 2012 at 12:21 pm	ဆရာ ..ကဗျာ အသစ်လေးတွေတင်ပေးပါအုံး…….နော်…စောင့်နေမယ်နော်…………..ကြိုးစားပါ
Awaylay says:	June 22, 2012 at 9:45 am	အချစ်ဆိုမှတော့ ရင်တွင်းဖြစ်ပဲပေါ့…ကဗျာလေးတွေကို ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ…..
Nyi Little says:	March 5, 2014 at 2:00 pm	ဖက်လို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲနဲတယ်ဖက်လို့မ၀ဘူး
suus lai says:	June 24, 2012 at 8:51 pm	heart ထိတယ်….ဆရာရေ …
zo.lay says:	July 18, 2012 at 5:25 pm	ကောင်းပါတယ် သူငယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဗျာတွေကိုပိုကြိုက်တယ် နောက်ထပ်လည်းရေးပေးပါအုံးနော် သူငယ်ချင်းကိုချစ်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးပေါ့
hninhnin says:	August 12, 2012 at 6:31 pm	အင်းကဗျာတွေကိုကြိုက်တယ်
Nyi Thu says:	September 4, 2012 at 7:21 am	အလွမ်းဓာတ်ခံရှိတဲ့အတွက် ကဗျာတွေဖတ်ရတာ ခံစားရပါတယ် …
zin gyi says:	September 5, 2012 at 1:03 pm	အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ..
JANE says:	September 16, 2012 at 10:08 am	ဘာလို့TORRESရဲ့နာမည်ယူရတာလဲငါက သူကိုအရမ်းချစ်တာ တစ်ခြားနာမည်သုံးလေ TORRESကိုကြိုက်နာ၎နစ်ရှိပီ ကြီလာရင်လည်းသှုနဲ့ယူမှာ
တောရက်စ် (mc) says:	September 17, 2012 at 10:30 pm	ဗျာ.. တောရက်စ်မှာ မိန်းမရှိတယ်နော်.. ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့လေ😛
မောင်မောင် says:	November 12, 2012 at 9:02 pm	ကောင်းလဲမကောင်းဘူး၇င်ထဲကိုအောင့်သွားတာပဲ
မင်းချစ်သူ says:	August 6, 2013 at 11:44 pm	အရမ်းကောင်းတယ်နော်သူငယ်ချင်းထံသို့ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုလေကျွန်တော့ရင်ဘက်ထဲမှာcopy ကူပြီး ချစ်နေမိသူတစ်ယောက်အတွက်ကဗျာလေးကိုအသုံးချခွင့်ပြုပါနော် @2!!!@
အရိုင်းစိုင်း says:	October 6, 2012 at 9:15 pm	တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ စိုင်းစိုင်းလိုပြောရရင်တော့ အရမ်းမိုက်တယ်ပေ့ါ။ ကြိုးစားပါ အကို။ အောင်မြင်မူတွေကို ဆက်တိုက်ခံစားနိုင်ပါစေ။
ဒီမို နတ်ဆိုလေး says:	October 11, 2012 at 10:05 am	အရမ်းကောင်းတယ်..ဗျ..
@-@ says:	October 20, 2012 at 10:24 pm	သိပ်ကြိုက်တယ်ဗျာ.. နောက်ထပ်ကြိုးစားပြီးရေးပြီး တင်ပေးပါဦး
kophyo says:	November 6, 2012 at 8:48 pm	ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါနော် ကျွန်တော်ကကဗျာချစ်သူပါ
moeshweaung says:	November 9, 2012 at 8:37 am	အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ
hnin thakhin says:	November 10, 2012 at 3:46 pm	ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ယူခဲ့တယ်နော်………..
suminnyonyo says:	November 14, 2012 at 4:57 pm	ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်
ko phyo says:	November 24, 2012 at 1:49 pm	အစ်ကို့ကဗျာကိုဖတ်ဖို့ညီလေးစိတ်မခိုင်သေးပါဘူး
Valentine says:	December 7, 2012 at 9:54 am	အဲဒီလို ကဗျာတွေတင်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အကို့ကဗျာတွေကိုအားကျလို့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလေးတွေကို တင်ချင်လို့ပါ။
တောရက်စ် (mc) says:	December 8, 2012 at 8:45 am	ကျနော့်ဆီကို မေးပို့ပြီးဖြစ်ဖြစ် အကောင့်မှာ စာချန်ခဲ့တာဖြစဖြစ် တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ by name နဲ့
maythu says:	January 8, 2013 at 1:28 pm	ကဗျာတွေကတကယ်လန်းတယ်ဗျာ…တကယ်ကြိုက်တယ်…အရမ်းတော်တာပဲနော်….
Yee Mon Thet says:	December 9, 2012 at 11:04 pm	အရမ်းကောင်းပါတယ်.. ကြိုးစားပါ.. ကုန်ရင်ထပ်ဝယ်စားပါ…:P
moemyintyan41 says:	December 18, 2012 at 6:26 pm	တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကဗျာတွေပါပဲ ကဗျာအားလုံးကိုကောင်းတယ်များများရေးဗျာအကို ဒီထက်အများကြီးရေးနိုင်ပြီး အခုထက်အများကြီးပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေ…ကြိုက်လွန်းလို့နည်းနည်းယူသွားတယ်နော်
moeeiset says:	December 20, 2012 at 4:51 pm	ကောင်းတယ် ကဗျာတွေက ဒါပေမယ့် ခံစားမှု ပေါ့တယ်
Minkhaung says:	December 20, 2012 at 5:00 pm	အကို့ကဗျာတွေကို ကြိုက်ပေမယ့် ပေးစရာကောင်မလေးမရှိလို့ယူမသုံးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကို့သူငယ်ချင်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ သရဲ ပြီးဆေးလိုချင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့ …ကြိုးစားပါအကိုရေ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကဗျာဆိုတာ အာဒံနဲ့ ဧ၀ ဆီမှာကတည်းကရှိခဲ့တာလို့။
lpeing says:	December 27, 2012 at 2:51 am	Hart ထိတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြောတာလားမသိ
bobo says:	February 18, 2013 at 2:56 pm	အရမ်းကောင်းတဃ်ဗျာ….ရင်ထဲကိုထိသွားတဃ်
shweyi says:	February 23, 2013 at 5:46 pm	အရမ်းလေးစားတယ်
တောရက်စ် (mc) says:	February 27, 2013 at 11:43 am	ကျေးဇူးပါ
Moe says:	February 25, 2013 at 1:55 pm	တောရက်စ်လို့ ဘာလို့နာမည်ပေးထားတာလဲ။ ကဗျာတွေက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ ရေးထားတာထင်တယ်။
တောရက်စ် (mc) says:	February 27, 2013 at 11:42 am	တောရက်စ်ဆိုတာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံး ဘောလုံးသမားဖြစ်နေလို့ပါဗျာ……………
ကျော်ဇင်သန်း says:	March 6, 2013 at 12:09 pm	ကဗျာတွေက အရမ်းကောင်းပါတယ် နှလုံးသားခြင်း တိုက်ဆိုင်တယ်
myosan says:	March 16, 2013 at 2:28 pm	ကောင်းတော့ကောင်းတယ် ဒါပေးမဲ့ကောင်းတယ် ဟဲဟဲ
myosan says:	March 16, 2013 at 2:31 pm	စိတ်တော့ရှိနဲ့ နော် တော်တော် ကောင်းလို့ ကြိုက်တယ် ………..ဂူဂူ ကိုပြောတာ
ko phyo says:	March 21, 2013 at 4:04 am	ထပ်တူညီတယ့်ကဗျာတွေရှိသလို…..ထပ်တူမညီတယ့် ကဗျာတွေက ကျွန်တော့ ရှေ့ရေးကိုကြိုပြောနေသလိုပဲနော်…..ကဗျာကောင်းလေးတွေကို မွေးဖွားပေးပါဦးနော်
La min pying says:	April 6, 2013 at 6:50 pm	အရမ်ကောင်းတယ်ဗျာ……………ဆရာ့ကဗျာတွေက heart ကိုထိစေတယ်…………ဟဲဟဲ…
ရှင်းသန့်နောင် says:	April 21, 2013 at 3:29 pm	ကောင်းတယ်ဗျာဆက်ရေးပါအားပေးမယ်နော
moemyintthu says:	May 28, 2013 at 12:34 pm	စာသားလေးတွေကို သဘောကျပါတယ်………….ဆက်ပြီးကြိုးစားနော် …………အားပေးလျှက်ပါ
လှိုင်မင်းထွန်း says:	June 15, 2013 at 1:08 pm	အကို.ရဲ. စာသားလေးတွေက ထိတယ်ဗျာ… မိုက်တယ်…
ရှင်းသန့်နောင် says:	July 18, 2013 at 11:09 pm	ကောင်းပါတယ်
nainglin says:	July 26, 2013 at 9:42 pm	ကြိုက်တယ်ဗျာ ယူထားလိုက်ပြီ ပိုင်ရှင်ရေ……….
Emo Aung Thu says:	July 27, 2013 at 8:23 pm	သိပ်ကောင်းတဲ့ကဗျာလေးတွေပါ ကျွန်တော်အကုန်လုံးနီးပါးကိုကြိုက်တယ် ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို ၀င်ကြည့် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အတွက်ရေးထားသလိုပါပဲ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်ထက် လည်းထပ်ရေးပေးပါဦးနော်
naymin says:	September 6, 2013 at 7:42 pm	အရမ်းနဲ.ကြိုက်တယ်ဗျာ နှလုံးသားကိုကွက်တိထိတယ်
naymin says:	September 6, 2013 at 7:43 pm	ဆရာ.ကိုအစဉ်အမြဲအားပေးနေပါတယ်
thu ya says:	November 20, 2013 at 12:52 pm	ကောင်းဘူးဗျာခံစားရလွန်းလို့ ခိခိ
မင်းထက် says:	December 8, 2013 at 7:42 pm	ရေရေလည်လည်လန်းတယ်ဗျာ
waimoethwin says:	December 15, 2013 at 11:59 am	အ၇မ်းနှစ်သက်မိတယ်
may says:	December 25, 2013 at 4:24 pm	ရင်ထဲကိုနင့်သွားတာပဲ
panei says:	February 22, 2014 at 6:49 pm	အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ။ နောက်ထပ်တွေမျှော်နေပါတယ်….
thet naung says:	March 2, 2014 at 5:11 pm	Good